Nanokatra Ny Petra-Bola An-tSerasera Ho An’ny Rehetra Ny Goavan’ny Aterineto Shinoa Alibaba Sy Baidu · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2013 4:44 GMT
Pikantsary avy amin'ny pejy fandraisana an'ny Yu'E Bao. Mampiseho lehilahy falifaly mampitombo vola eo amin'ny hazo ny sary.
Sambany ireo Goavan'ny aterineto ao Shina no mihantsy ny sehatr'asa ara-bolan'ny firenena, izay bahanan'ny bankim-panjakana izay zatra mitodika kokoa amin'ireo orinasa lehibe toy izay mitodika amin'ny orinasa madinika sy ny olo-tsotra tsirairay. Malaza eo amin'ny olona ny vokatra fametraham-bola an-tserasera ataon'ireo goavan'ny aterineto ireto.
Nahitam-pahombiazana tsy voafehy tamin'ireo Shinoa mpampiasa vola ny fidiran'ireo orinasa tahaka an'i Alibaba , Baidu sy Tencent vao haingana teo amin'ny tsenam-bola amin'ny alalan'ny fanomezana tolotra mitovy amin'ny Trano fametraham-bola.
Nanokatra lalana amin'ny fanokafana tamin'ny jona 2013 ny sampan'orinasany misahana ny fametraham-bola antsoina hoe Yu'e Bao, izay midika hoe “harena ambony ampanga” ka mikambana ao amin'ny Alipay ilay orinasa e-varotra goavana indrindra antsoina hoe Alibaba. Ny Alipay, habaka fanakalozam-bola sy fividianan'entana mitovy amin'ny PayPal, dia mamela ny mpikambana ao aminy miisa 800 tapitrisa hampiasa mivantana ny vola ananany ao amin'ny habaka ho lasa petra-bola, ka hahazoana zanabola 3 na 4 isan-jato isan-taona ary azo sintonina amin'ny fotoana tianao hakana azy ny vola. Tamin'ny datin'ny 14 Novambra, nahangona vola 16,4 miliara dolara ny Yu'e Bao ka lasa petra-bola goavana indrindra ao Shina.
Noho ny fahombiazana goavan'ny Yu'E Bao, nirotsaka an-tsehatra ihany koa ny orinasaShinoa hafa. Baidu, mili-pikarohana amin'ny alalan'ny aterineto sy mpitahiry votoaty lehibe indrindra ao Shina, nandefa ny foibe ara-bolan'ny Baidu tamin'ny 28 Oktobra ary nahatratra ny iray miliara yuan ambony indrindra ekena (164,3 tapitrisa dolara amerikanamillion US dollars) araka ny lalàna Shinoa tao anatin'ny dimy ora tao anatin'ny indray andro.
Ny WeChat moa dia efa tantaram-pahombiazana ao Shina amin'ny maha-fampiharana finday fandefasan-kafatra azy, ary hanitatra ny ambaindainy hihoatra ny tontolon'ny fifandraisana amin'ny finday avo lenta ny tompon'ny Tencent ka hahatonga azy ho sehatry ny servisy ara-bola. Hisy rafitra fametraham-bola hapetraka ao amin'ny WeChat amin'ny tapaky ny volana Desambra. Io rafitra io no hamela ny mpisera hampifandray ny karatra fisintonam-bolan'ny banky amin'ny kaontiny WeChat, hahafahan'izy ireo mametra-bola amin'ny alalan'ny TenPay, rafitra fandoavam-bolan'ny Tencent.
Nitehatehaka tamin'ity fironana vaovao ity ny mpiseran'ilay tranonkalan'ny famahanam-bilaogy madinika Shinoa malaza Sina Weibo, toa an'i “Sipakely Masiaka Lehibe Amin'ny Finansa” (@资深金融小邪女), izay miasa eo amin'ny sehatra ara-bola:
Nahoana aho no manohana ny Yu’E Bao? satria manome tombondahiny ho an'ny eny amin'ny fototra izy. Misy ireo sampan-draharahan'ny toe-bola (finance) sasantsasany no mandresy lahatra ny mpandamina hanafay ny Yu’E Bao ary mampiasa ny fanehoakevi-bahoaka sy ny kaontin'olo-malaza ao amin'ny Weibo hanafika azy. Mitsiriritra ry zareo, mialona sy mankahala ny fahombiazan'i Yu’E Bao. Miala ireo mpandala ny mahazatra izay mifototra amin'ny ampihimamba sy mamotika ny mpifaninana no antom-pisian'izy ireo !
Sun Siyuan, mpanangom-baovao momba ny toe-bola, mino fa ho lohalaharana eo amin'ny sokajin'asan'ny fampiasam-bola an-tserasera eo amin'ny resaka toe-bola i Shina:
Nifampiresaka tamin'ireo maintimolalin'ny toebolan'i Wall Street maro aho andro vitsivitsy lasa izay momba ny fivoarana mafanan'ny toebolan'ny aterineto ao Shina, saingy indrisy fa tsy mbola nandre izany fomban-kevitra izany ry zareo. Ny fanarahamaso akaiky ataon'i Amerika amin'ny tsenam-bola no manasarotra ny orinasan'ny aterineto hanao zavatra goavana eo amin'ity sehatra ity. Ny lalàna henjana eo amin'ny asam-pampiasambola ao Etazonia ihany koa dia manasarotra ho an'ny aterineto ny hampivoatra ny sokajin'asan'ny [fampiasam-bola an-tserasera]. Nefa ny any Shina, noho ny fahasamihafana eo amin'ny lalàna, dia mety hisongona an'i Etazonia i Shina [eo amin'ny sokajin'asan'ny fampiasambola an-tserasera].
“Misidina avo 1985″ (@展翅高飞1985), mpisera Weibo tsotra, manoritsoritra ny fanaony an-tserasera isan'andro mifandraika amin'ny servisin'ny Alibaba:
呃。。。每天必做的事情之三：到@淘宝网 首页领淘金币，到@支付宝 查看余额宝收益，到@百度理财 看百赚收益！我是一个感恩和知足的人！
Zavatra telo tsy maintsy atao isan'andro: mandeha ao amin'ny Taobao.com handraisana ‘vola volamena’; mandeha ao amin'ny Alipay hijery ny tombombarotr'i Yu’E Bao; mandeha ao amin'ny Toe-bola Baidu hanamarina ny tombombarotra azo.
Saingy mbola misalasala ny sasany. Niteny ny mpisera Weibo “Mpijery aterineto sy mpanao fikarohana” (@互联网观察与研究员) :
Ny fiakaran-karenan'ny Yu’E Bao tampoka dia mitaratra ny mahanatiora ntaolo ny tsenambolan'i Shina.